2013 November & December donation plan « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
2013 November & December donation plan
As the venue for November and December, 2013 donation plan (42nd monthly donation), ODF Myanmar has chosen “Mi Ba Metta” Orphanage from Aye Tha Yar Township, Shan State.
Being established by Abbot U Kuwi Nanda in 2010, the place provides food, shelter and education to orphans from nearby places.
At the orphanage, two teachers are in charge of teaching 40 kids, ranging from kindergarten to 11th grade level.
Although feeding the kids is solved with the help of committee members of the orphanage, the place is encounteringaproblem to provideaproper shelter for the kids.
Since the hostel where the kids are currently living is the one provided by the owner only forashort period of time, the committee of the orphanage is trying to buy 60 x 80 ft land.
Therefore we are announcing this news so that our friends and donors, who are enthusiastic to offer hands, would cooperate with us in contributing to suchaplace which provides food, shelter and free education for orphans.
Please be informed that donations will be collected till 12-January-2014. Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our websitehttp://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ နှင့် ဒီဇင်ဘာလ အလှူ (၄၂ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အေးသာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ မိဘမေတ္တာ မိဘမဲ့ဂေဟာအား လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော် ဦးကုဝိနန္ဒမှ စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ မိဘမဲ့ကလေးများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်၍ ပညာသင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမ နှစ်ဦးမှ တာဝန်ယူ၍ မူကြိုမှ ဒသမတန်းအထိ ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၄၀ အား ပညာသင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။
ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်များ၏ နှိုးဆော်ပေးမှုကြောင့် ကလေးများ၏ စားသောက်ရေးအတွက် ဖူလုံမှုရှိသော်လည်း နေရာထိုင်ခင်းအတွက် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။
လက်ရှိ ကလေးများနေထိုင်ရာ အဆောင်မှာ ပိုင်ရှင်မှ ခေတ္တနေထိုင်ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းကော်မတီအနေဖြင့် ပေ ၆၀ × ၈၀ မြေတစ်ကွက်ကို ဝယ်ယူရန် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ မိဘမဲ့ကလေးများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ပညာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသော မိဘမေတ္တာ မိဘမဲ့ကျောင်းအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီလိုသူ စေတနာရှင် မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူ ရှင်များအား မိမိတို့ ODF Myanmar နှင့် လက်တွဲ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ အလှူ တွင် တတ်စွမ်းသလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donateတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။